गैँडाकोटका अतिविपन्न समुदायका बृद्धवृद्धामा वाथ र हाडजोर्नीको समस्या जटील ।
By vijayafm on	 March 17, 2017 स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
गैँडाकोट ४ चैत्र ।
गैँडाकोटका अतिविपन्न समुदायका बृद्धवृद्धामा वाथ र हाडजोर्नीको समस्या जटील देखीएको छ । गैँडाकोट नगरपालीकाको सहयोग, ज्येष्ठ नागरीक कल्याणकारी प्रतीष्ठान नेपालको सहकार्यमा सहज सामुदायीक अस्पतालको आयोजनामा चैत्र १ गतेदेखी सुरु भएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा यस्तो पाईएको हो ।
गैँडाकोट मुकुन्दपुर र अमरापुरीका १७ वडाका आर्थीक अवस्था अति कमजोर रहेको परिवारका वृद्धवृद्धामा वाथको समस्या, हाडजोर्नीको समस्या र छातीको समस्या जटील देखीएको सहज सामुदायीक अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टर डा. सुरज पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पराजुलीका अनुसार तिन दिनसम्म ३ दर्जन वृद्धवृद्धामा गरीएको परिक्षणमा करिब ६० प्रतीशतमा वाथ र हाडजोर्नीको समस्या देखीएको छ ।
शिविरमा गैँडाकोट मुकुन्दपुर र अमरापुरीका १७ वडाका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाले सहयोग गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरीकको निशुल्क परिक्षण चैत्र १५ गतेसम्म चल्ने अस्पतालका अध्यक्ष करुणासागर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । १५ दिनसम्म करिब २ सय विपन्न परिवारका ज्येष्ठ नागरीकको स्वास्थ्य परीक्षण हुने अस्पतालले जनाएको छ । एउटै विरामीमा धेरै थरी रोग पनि लाग्ने गरेको पाईएको अस्पतालका डा. पराजुलीले बताउनुभएको छ ।